Tababaraha Man Utd Mourinho Oo Indhahiisu Qabteen Xidig Da'yar Oi Reer Brazil Ah
Tuesday, December 18th, 2018 - 21:46:07
Sunday November 12, 2017 - 09:22:04 in Wararka by Hussein Hadafow
José Mourinho macalinka Man Utd ayaa maanka ku hayao qorshaha fog ee uu ku xoojinaayo kooxdiisa Manchester United marka uu suuqa kala iibsiga dib u furmo bisha Janaayo ee soo aadan.
Macali ka Shayaadiinta Cas ayaa markaan indhihiisu qabtee xiddiga khadka dhexe ee reer Brazil Artur Melo kaasi oo ah xidig aad u da'yar.
Waxaa lala xariirinaayay bedelka ay Barcelona ku dooneeyso in uu bedelo Andres Iniesta ,waxaana macali Special One uu rajeynaya in uu tartankaan lagu doonaayo xidigaan mucjisad ahi uu ku guuleeysyo isagoono caadaadis kala kulmaay kooxo waa weyn oo Yurub waxaana uu maanka ki hayaa i wiilka a Old Trafford uu keeno Janaayo.
Melo waxa uu dhashay 1996-dii isagoona ka soo baxay akadeemiyadda dhallinyarada ee kooxda Gremio, ma ahan ciyaaryahanka kaliya ee dhalinyarada ah ee qabtay indhaha tababaraha Manchester United. Sida laga soo xigtay wargeyska reer Portugal ee Record, 16 jirka weerarka uga ciyaara Umaro Embaló ayaa ka tagi doona Benfica si uu ugu biiro akadeemiga Manchester United sida ugu dhakhsaha badan.
Lacagta suuqa kala iibsiga ayaa ku jirta 5 milyan ginni sida ay ku warameyso warbaahinta Portuguese, kaasoo loo arkay inuu ku filan yahay inuu ku soo qaato adeega ciyaaryahanka islamarkaana ka ciyaara garabka ,waxaa sidoo kale lala xariirinayaa xidigaan kooxda faca weyn ee Real Madrid.
W/D: Cabdirashiid Qanciye